दुई फिटकी गीताको डान्सर बन्ने सपना - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
दुई फिटकी गीताको डान्सर बन्ने सपना
अनुपम भट्टराई || 8 April, 2021
स्याङ्जा, वालिङकी गीता भुसाललाई सानैदेखि डान्सर बन्ने मन थियो । उनले काठमाडौंमा आएर केही समय त डान्स सिकिन् पनि । तर त्यो बेला कसैले पनि उनलाई सहयोग गरेनन् । आर्थिक अभाव र शारीरिक अशक्तता नै उनको यो सपना पूरा गर्नका लागि बाधक बन्यो ।
गीताको सपना भनेको राम्रो डान्सर बन्ने र केही गरौँ भन्ने नै हो । उनी अझै पनि डान्समै भविष्य खोज्न चाहन्छिन् । उनले डान्सर बन्नका लागि धेरै संघर्ष गरिन् र अझै प्रयास पनि गरिरहेकी छन् । तर, सफल बन्न भने सकेकी छैनन् ।
‘मलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा र रहर भनेको डान्सर बन्नु हो, केही सिकेकी पनि थिएँ, म डान्सिङ गर्छु पनि । तर, त्यो बेला आर्थिक अभाव भयो र अहिले पनि त्यही नै हो, साथै शरीरले पनि साथ दिएन,’ उनी भन्छिन् ।
२८ वर्षीया भुषाल होचो कदकी छन् । उनको उचाई २ फिटको हाराहारीमा होला । त्यसैले पनि उनलाई मनले धेरै कुरा गरौँ जस्तो लागे पनि शरीरले साथ दिँदैन ।
अहिले उनी काठमाडौंको स्वयम्भू क्षेत्रमा धागोबाट बनेका लकेट, फूल बेच्ने गर्छिन् । स्वयम्भूमा मात्रै होइन, उनी यी सामान बेच्न चक्रपथ र बानेश्वरसम्म पुग्छिन् । अहिले धागोबाट बनाइएका सामानहरू बेच्ने गरेको र बिहान बेलुकाको समयमा बनाउन सिक्ने गरेको उनी बताउँछिन् ।
‘जसोतसो काम गरिरहेकी छु, अहिले यही कपडाका लकेटहरू बेच्ने गर्छु, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन र सजिलो पनि,’ उनले भनिन्, ‘दिउँसो यता बेच्यो । बिहान र बेलुका बनायो, चलिरहेको छ ।’
भुषालले काठमाडौंमा आएर यसरी बेच्न थालेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । उनी बालाजुमा बस्छिन् र बेच्नका लागि कहिले चक्रपथ, कहिले बानेश्वर र कहिले स्वयम्भू पुग्छिन् । उनको शरीरले साथ नदिने भएकोले आफै बजार आउन सक्दिनन् । उनलाई बालाजुस्थित अपाङ्ग सेवा केन्द्रबाट ल्याउने र पुर्याइदिने व्यवस्था छ । उनी बस्ने पनि त्यही अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा नै हो ।
अपाङ्ग सेवामा बनेका यस्ता सामान बेच्ने उनीजस्तै अन्य तीन चार जना पनि छन्, जो फरक फरक स्थानमा बसेर अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा बनाइएका सामान बेच्ने गर्दछन् । उनी बालाजुमा बस्न थालेको तीन वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा उनले धेरै कुरा बनाउन सिकिसकेकी छन् ।
उनले डिएसए नेपालमा बसेर ६ वर्ष पढिन् । कक्षा ४ देखि कक्षा १० सम्म त्यहाँ पढेको उनी बताउँछिन् । एसएलसीपछि भने त्यहाँ बस्न नपाएको र अन्य संस्थाले नलिने भएपछि उनी यस यो सीप सिक्न लागेकी हुन् ।
कसरी पुगिन् बालाजु ?
एकपटक उनी आफ्नो गाउँ वालिङ गएकी थिइन् । त्यही बेला उनलाई चिन्ने एक जनाले बालाजुको लोकेशन दिएको र फोन गरेर त्यहाँ गएको उनी बताउँछिन् ।
यो संस्था तिमीहरूजस्तै शारीरिक अशक्तता भएकाहरूलाई राख्ने संस्था हो, आएर बस्न सक्छौ भनेर छिलिङ म्यामले भनेपछि त्यहाँ आएर केही सिकौँ भनेर बसेकी हूँ, उनी भन्छिन्, ‘यहाँ पढ्न त पाईंदैन । काम सिक्न चाँहि पाइन्छ’ भन्नुभएको थियो ।
उनी काठमाडौं आएको १३ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधि ६ वर्ष उनले पढेर बिताइन् भने शुरुका केही वर्ष र पढिसकेपछिको केही वर्ष यत्तिकै बसिन् । उनको घरमा बाबाआमा र दाजुभाई छन् । बाबाआमा खेतीकिसानी गर्नुहुन्छ र दाजुभाई कता कता के के काम गर्नुहुन्छ, उनी भन्छिन् ।
उनलाई गाउँघरमा बस्न भन्दा सहरमै बस्न मन लाग्छ । किनभने उनको शरीरले गाउँमा बस्दा साथ दिँदैन । त्यसैले, पनि उनी सहरमै दुःख गरेर बसिरहेकी छन् । बालाजुबाट यताउति हिँड्दा भने अपाङ्ग स्कुटीको उपयोग गर्छिन् उनी, तर चलाउन सक्दिनन् । त्यहाँकै एकजना दाईले ल्याइदिने गरेको उनी बताउँछिन् ।
एसएलसी पास गरिसकेकी छन् उनले, साथै केही सीप पनि सिकिसकेकी छन् । तर उनलाई अझै पनि एउटा चिन्ताले भने सताइरहन्छ । त्यो हो अब के गर्ने ?
यसरी काम गर्नुपर्ने उनको ड्यूटी समय भनेको बिहान १० बजेबाट साँझ ५ बजेसम्मको हो । अपाङ्ग सेवा केन्द्रमा अहिले २२ जना रहेका छन् । यसैगरी कसैले बनाउने र कसैले बेच्ने गर्छन् । यो बेचेको पैसा उनीहरूले अपाङ्ग सेवा केन्द्रलाई बुझाउँछन् । उनीहरूलाई चाहिने कपडा भने अपाङ्गसेवा केन्द्रले नै उपलब्ध गराइदिने गरेको छ । साथै बनाउने र सिकाउने काम पनि अपाङ्गसेवा केन्द्रले नै गर्छ । दिनमा उनले यस्ता सामान बेचेर हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछिन् ।
‘मलाई सकेसम्म त डान्सर नै बन्ने मन थियो, तर अब समय र परिस्थितिअनुसार यो काम गरिरहेकी छु, म डान्स गर्छु भन्ने कुरा घरमा भनेको छैन,’ उनी भन्छिन् ।
एसएलसी पास गरिसकेकी छन् उनले, साथै केही सीप पनि सिकिसकेकी छन् । तर उनलाई अझै पनि एउटा चिन्ताले भने सताइरहन्छ । त्यो हो अब के गर्ने ? किनभने अपाङ्गसेवा केन्द्रमा त उनी सीप सिक्न मात्र बसेकी हुन् । सीप सिकिसकेपछि निस्किनु पर्छ । तर कसरी र कहाँ जाने ? उनलाई यो चिन्ताले दिनरात पिरोल्ने गर्छ ।